अन्ततः यो समयको पनि अन्त्य हुनेछ
सरोज ढुंगाना आइतबार, असोज ४, २०७७
१९औं शताब्दीतिर जब लुइ पास्चरलगायतका वैज्ञानिकले भाइरसविरुद्धको पहिलो खोप पत्ता लगाए । त्यसपछि रोगका कारण कीटाणुहरू हुन् भन्ने पत्ता लाग्याे । कीटाणु निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने वैज्ञानिक मान्यता स्थापित भयो । यसपछिका शताब्दीमा तीव्र रूपले विभिन्न भाइरस पत्ता लागे र त्यसविरुद्धका खोप आविष्कार भए । जसका कारण संसार मानवका लागि कैयौं प्राणघातक रोग निर्मूलको दिशातर्फ उन्मुख भयाे । अहिले कोभिड–१९ भाइरसको त्राहित्राहिका बीच संसारले त्यही मान्यतालाई पछ्याउँदै कोरोनाविरुद्धको खोपको अपेक्षा, आशा र कसरत गरिरहेको छ ।
विज्ञान र अनन्त पूर्ण
मानव मनमस्तिष्कको प्रयासस्वरूप सिर्जित विज्ञानको एउटा निश्चित दायरा नहुँदो हो त, यतिबेला कोरोनाले सिंगो पृथ्वीलाई हायलकायल बनाउने थिएन । सम्भव भएको भए विज्ञानले मानवका लागि घातक भाइरसहरू नै नलाग्ने, उत्पत्ति नहुने व्यवस्था गरिसक्थ्यो होला । मानव सभ्यताका महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए, ‘हिजो जे सम्भव थिएन, त्यसलाई विज्ञानले आज सम्भव बनाउनेछ । आज जे सम्भव छैन, त्यसलाई भोलि सम्भव बनाउनेछ । तर एउटा त्यस्तो क्षेत्र हुनेछ, जहाँ विज्ञानले केही पार लाउन सक्नेछैन ।’
हेर्दा हेर्दै उराठलाग्दो गृष्मलाई शीतल दिन आउने वर्षा, वर्षाले बनाएको हिलो सुकाउँदै मखमलीको मगमग वासना लिएर आउने शरद् अनि क्रमशः हेमन्त, शिशिर र वसन्तका यामहरूले यो सबै बितेर जानेछ भन्ने संकेत गर्दैन र ?
आइन्स्टाइनको यस भनाइले विज्ञानको सीमिततालाई मात्रै संकेत गर्दैन, संसारको अनिश्चिततालाई पनि संकेत गर्दछ । अहिले प्रयोग भइरहेको शक्तिशाली हबल स्पेस टेलिस्कोप होस् या ब्रम्हान्डका विभिन्न रहस्य पत्ता लगाउने अपेक्षा गरिएको २०२१ मा लन्च गरिने भनिएको जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप होस् । यी सबैले अनन्त ब्रम्हान्डका प्रत्येक पिण्ड पत्ता लगाउन सक्नेछैन । जति टाढासम्म देख्न सकिने टेलिस्कोप बनाए पनि त्योभन्दा अनन्त टाढा बाँकी नै हुन्छ । शायद यही अनन्त ब्रम्हान्ड तत्त्वलाई मनन गर्दै उपनिषद्मा लेखिएको छ–
अर्थात्, यो वा त्यो सबै पूर्ण छ, पूर्णमा पूर्ण राख्दा पनि पूर्ण नै हुन्छ र पूर्णबाट पूर्ण झिक्दा पनि बाँकी रहने सदैव पूर्ण नै हुन्छ ।
विज्ञानको सिद्धान्त, साधन र प्रविधिले यो अन्नत पूर्णको भेउ पाउन सक्ने कुरा भएन । अध्यात्माको क्षेत्रमा डुबुल्की मार्दै गहिरो साधनाको रापतापबाट निस्किरहेका वा ध्यानलोकमा जान लालायित चिकित्सक, वैज्ञानिक र इन्जिनियर अहिले प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
त्यस परमसत्य वा परम सत्ता जान्न मन्दिर, मस्जिद र चर्चका ढोका पुग्नुपूर्व आफैंभित्र जान जरुरी देख्छन् महान् योगीहरू । भारतमा प्रख्यात र अत्यन्त्यै सादा जीवन बिताएका रमन महर्षिले ‘म को हुँ’ भनेर आफैंलाई जान्न उत्प्रेरित गरेका छन् ।
उनीहरूमध्ये प्रायःजसो विज्ञान मानिसको मस्तिष्कको सानो झिल्को मात्र रहेको र त्यसभन्दा धेरै पर पुगेर मात्र प्रश्न, कौतूहलता हराउन सक्ने अवस्था आउने बताउँछन् । मानिसले प्रश्न सकिने बेला सत्यको प्रकाश ओढ्छ भन्ने गरिन्छ । राजा जनकले अष्टावक्र ऋषिबाट ज्ञान लिँदा लिँदै प्रश्नहीन बने जस्तै वा बोधिवृक्षमुनिको अनवरत ध्यान साधनाले बुद्ध बनेपछि मात्र, उसले आइन्स्टाइनले भनेको विज्ञानले पार लगाउन नसक्ने क्षेत्र जान्दछ । प्रश्नहीन अवस्थामा पुग्नु नै परम सत्यबोध हुनु हो । त्यस परमसत्य वा परम सत्ता जान्न मन्दिर, मस्जिद र चर्चका ढोका पुग्नुपूर्व आफैंभित्र जान जरुरी देख्छन् महान् योगीहरू । भारतमा प्रख्यात र अत्यन्त्यै सादा जीवन बिताएका रमन महर्षिले ‘म को हुँ’ भनेर आफैंलाई जान्न उत्प्रेरित गरेका छन् ।
मानिसले आफूलाई जान्दछ, उसलाई यो थाहा हुन्छ कि, यो परम ब्रम्हान्डमा ऊ बालुवाको सूक्ष्म कण जतिकै छ । जब उसले आफ्नो नाशवान् शरीर जान्दछ, तब आफ्ना लोभ, मोह, क्रोध व्यर्थ हुन् भन्ने जान्दछ । उसले यो संसार अनित्य छ भन्ने बुद्ध मत बुझ्दछ । हेर्दा हेर्दै उराठलाग्दो गृष्मलाई शीतल दिन आउने वर्षा, वर्षाले बनाएको हिलो सुकाउँदै मखमलीको मगमग वासना लिएर आउने शरद् अनि क्रमशः हेमन्त, शिशिर र वसन्तका यामहरूले यो सबै बितेर जानेछ भन्ने संकेत गर्दैन र ?
एकदमै सानो समयावधिको ऋतु होस् या लामो समयावधिको पृथ्वीको जीवनरेखाको मौसम सबै बदलिनेछ । हाम्रा पीर, चिन्ता, नैराश्यता पनि बितेर जानेछ जसरी खुसी, उत्साह, उमंग बितेर गएको छ । यसर्थ न भूतलाई सम्झेर नोस्टाल्जिक हुनुको अर्थ छ न त भविष्यलाई सम्झेर कहालिनु छ । वर्तमानलाई मात्रै हामीले यो पनि बितेर जानेछ भन्ने अनित्य यथार्थको बुद्धमत महसुस गर्न सक्यौं भने हामी आनन्दभावको यात्रामा जीवन सुखमय तवरले बिताउन सक्छौं ।
महामारी र मानिस
बेलाबखतमा यस संसारमा प्राकृतिक रूपमा आउने प्लेग, सार्स, हैजा र अहिलेको कोरोना जस्ता महामारीरूपी सन्ताप मात्रै होइन । मानवीय कारण उत्पन्न भएका महाभारत र रामायणकालीन भीषण युद्धदेखि पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धले समेत अत्यधिक मानवीय क्षति भएकाे छ । यस्तो बेलामा प्रत्यक्ष रूपमा हुने क्षतिभन्दा पनि अप्रत्यक्ष क्षतिको लेखाजोखा कम भएका हुन्छन् । मानिसले जीवनलाई नित्य ठानिरहेका हुन्छन् । निश्चित दिशामा जीवन जान्छ भन्ने अपेक्षा बोकेका हुन्छन् । जब महामारीका कारण चल्दै गरेको नित्य जीवन चक्रमा असामयिक ढंगले अनपेक्षित ओरालो गति सुरु हुन्छ, तब मानिस अत्तालिन थाल्छ ।
हरेक मानव मानसिक रूपमा स्वस्थ्य हुने हो भने सिंगो मानवसँग कोरोना भाइरसले गरिरहेको यो विश्व युद्ध उसका लागि पक्कै हार हुनेछ ।
कोरोनाका कारण यसबेला विश्वमा करोडौं मानिस बेरोजगार हुनुपरेको छ, चलिरहेको पढाइ बन्द गरिएका छन्, संसारमा के के न गरौंला भनेर तय गरिएका अन्तर्राष्टिय सभा, सम्मेलनहरू स्थगन गरिएका छन् । मानिस घरमा बन्द भएर बसेको महिनौं नाघेको छ । यस्तो बेलामा मानसिक स्थिति ठीकठाक नहुँदा र अत्तालिँदा धेरैजसो डिप्रेसनको सिकार भएका छन् । आत्महत्याको तथ्यांक उकालोलाग्दो छ । अझ अविकसित मुलुकका समाजमा घरभित्र हुने हिंसा र अपराधहरू सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भाइरस आफैंमा एक जीवन भएको सूक्ष्म अणु हो । सिंगो पृथ्वीका मानव समुदायसँग उसले छेडिरहेको युद्धमा एक न एक पक्षको विजय हुन्छ नै । आधुनिक भौतिक विज्ञानको क्वान्टम फिजिक्स वा अध्यात्मको सूक्ष्म विचारको विराट् शक्तिको अवधारणा आत्मसात् गर्ने हो भने भने यतिबेला सिंगो मानव समुदाय मानसिक रूपमा स्वस्थ्य हुन जरुरी छ । यदि हरेक मानव मानसिक रूपमा स्वस्थ्य हुने हो भने सिंगो मानवसँग कोरोना भाइरसले गरिरहेको यो विश्व युद्ध उसका लागि पक्कै हार हुनेछ । मानसिक स्वस्थ्यको मतलब आफ्नो शुद्ध चित्त हो, तटस्थ भाव हो । जब हामीमा यो पनि बितेर जानेछ भन्ने भावको सिर्जना हुन्छ, तब हामीमा एक खालको असीम ऊर्जा उत्पन्न हुनेछ ।
त्यस ऊर्जाभित्र प्रेम, करुणा, सहिष्णुता र सकारात्मकताको रापताप हुनेछ । यदि संसारमा यसको खोप बने पनि नबने पनि यसलाई हामीले जित्न सक्ने तागत उत्पन्न गराउनुपर्नेछ । यदि त्यस्तो तागत र ऊर्जा हामीमा बन्यो भने त्यो कोरोनाविरुद्ध बनाइएको खोपभन्दा शक्तिशाली पक्कै हुनेछ । के थाहा आइन्स्टाइनले भन्न खोजेको विज्ञानले पत्ता लगाउन नसक्ने कुनै एक ठाउँ तपाईं, हामीभित्रै पो छ कि ?
खैर, यो समय पनि बितेर जानेछ !
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ४, २०७७ २०:३३